Nahazo Tampoka An’i Japana Tsy Nanampo Na Inona Na Inona Ilay Tondradrano Goavana Tany Akaikin’i Tokyo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Septambra 2015 14:50 GMT
Maribolana: “Miyagi, Tochigi, Ibaraki: Maty 4, Tsy hita 15; tokantrano 12.000 tratry ny tondradrano.” Dikasary avy tamin'ny fantsona ofisialy Youtube an'ny ANN.
Ny herinandro lasa teo, niatrika ora-mikija nandritra ny andro maro ny faritr’ i Tokyo sy Kanto noho ilay Tafio-drivotra Etau. Voakapoka mafy tamin'ilay tondradrano lehibe sy tsy nampoizina ireo tanàna fatorian'ireo mpiasa monina akaikin'ny tanan-dehibe sy ireo fileovana any avaratra atsinanan'i Tokyo.
Farafahakeliny tokatrano 12.000 no nizaka ny tsy eran'ny ainy tamin'ilay tondradrano, izay farafahakeliny namela olona efatra maty ary farahafakeliny olona miisa dimy ambiny folo tsy hita popoka.
Nahavariana ny halehiben'ilay tondradrano, ary nampahatsiahy ilay fahasimbàna naterak'ilay “tsunami” (onjan-dranomasina goavana be) izay nikapoka ny avaratra atsinanan'i Japana ny volana Martsa 2011.
Raha namely ny faritra maro tany avaratra atsinanan'i Tokyo ilay tafio-drivotra Etau, i Joso no tanàna iray teny voa mafy indrindra, ao amin'ny Fileovan'i Ibaraki, eo amin'ny 60 kilaometatra any avaratra atsinanan'ny ivon'i Tokyo.
Namaky sy nandrava ny fefilohan'ny Renirano Kinugawa ireo orana nikija be.
Ny Google Crisis Response Map [teo aloha-sy-aty aoriana], mampiseho sary avy amin'ny zanabolana misy ny haben'ny faritra #Kinugawa tratry ny tondradrano : http://www.google.org/crisisresponse/japan .Manantena ary mivavaka mafy amin'ny fonay tokoa izahay mba ho avotra daholo ny tsirairay ary ho afaka hanomboka hanamboatra haingana araka izay tratra ny fiainany.
Nampiseho ny haben'ny tondradrano ihany koa ireo tatitry ny vaovao :
Nanome vaovao mivantana tsy ankijanona mikasika ilay loza voajanahary ireo tambajotram-baovao. Nizara ny sasany tamin'ireo sary ao amin'ny Twitter ireo mpampiasa:
Ito ny vaovao mivantana avy amin'ilay fefiloha vaky ao [amin'ny Renirano] Kinugawa. Misaotra ny JSDF (Hery Fiarovantena Japana), avotra daholo ireo tafahitsoka teny an-tafontrano. Tena nahavita niasa haingana ny JSDF mba hamonjy azy ireo raha vao notairina tamin'ny zava-niseho. Enga anie ho afaka avotana ihany koa ireo olona tafahitsoka any amin'ny faritra hafa misy tondradrano! Ao anatin'ny vavakay izy ireo!
Iray tamin'ireo be mpizara indrindra tamin'ny Twitter ilay hetsika nanavotana ilay mpivady niaraka tamin'ireo alikany:
Tsy tafàla nijery ny fahitalavitra nandefa ny fandrakofana ny fanavotana ilay lehilahy lehibe nitazona ny alikany (izay tsy nivovo na nanao zavatra hafa) mihitsy aho. Rehefa avotra tanteraka izy ireo, nanomboka nitomany amin'izay aho.
Ito ilay fanavotana iray manontolo:
Avotra ilay vehivavy sy ilay alikany; ilay lehilahy sy ilay alika ambiny no dingana manaraka.
Nanamarika ireo mpijery hafa hoe mety tafiditra anaty làlan'ireo mpanao asa fanavotana no misy ilay angidimby anà televiziôna naka ireo sarinà fanavotana:
Raha teo am-pieritreretana aho hoe zava-dehibe kosa hoe avotra izy ireo, folo minitra taorian'izay, lasan'ny rano ilay trano iray manontolo. Nangovitra aho rehefa tonga saina hoe tena nifanakaiky ny zavatra niseho. Ao anatin'izany, tokony aseho eto ary atao fanta-bahoaka ho menatra ilay ekipanà angidimby izay teny amin'ny làlana anaovana asa fanavotana.
Nankalazaina sy nisaorana eran-tany ny Hery Fiarovantenan'i Japana (JSDF, Tafik'i Japana) tamin'ny ezak'izy ireo hanampiana haingana sady nety tsara ireo olona tratry ny tondradrano.
Hita navitrika tao amin'ny Twitter sy ireo media hafa ny JSDF, nampahafantatra ny ezaka fanavotana sy famonjena olona nataon'izy ireo.
Izao ny toe-javatra niseho tany Kanto ao avaratr'iJapana taorian'ny nametrahana anay hanao fanampiana noho ilay ora-nikija lavareny. Mbola mitohy ny ezakay any Ibaraki, manampy ireo tafahitsoka ao amin'ny tondradrano, ary mametraka sambokely hanavotra ireo olona ho eny amin'ny toerana azo antoka.
Lasa sarisary hanihany ao amin'ireo media sosialy ilay trano izay tena nahagaga fa nahavita niatrika tsara ilay tondradrano:
Nieren-doza tamin'ilay tondradrano nandritra ny alina ny Trano Hebel.
Ny Trano Hebel dia marika trano efa vonona ny ho atambatra fotsiny vita ao Japana. Mahazatra any amin'ny tanàna manodidina ny renivohitr'i Japana ireo trano tonga dia atambatra fotsiny; amboarina any aminà orinasa iray ireo akora ilaina ary avy eo alefa any amin'ny toerana fanambàrana mba ho atambatr'ireo mpandraharaha.
Notaterin'ny Livedoor, vohikalam-baovao amin'ny Aterineto, ny resabe tamin'ny media sosialy mikasika ilay Trano Hebel. Araka ny Livedoor, nilaza izao ny mpaneho hevitra iray tao amin'ny Aterineto :
Eny, tena mahavita miatrika tsara ny tondradrano ny Trano Hebel. Rehefa manamboatra trano aho, miaraka amin'izy ireo hatrany!
Midika Fiovan'ny Fomba Fisehon'ny Rivodoza Any Japana Ny Fiovàn'ny Toetrandro
Hatrizay, miala avy any andrefana ka mikisaka mankany atsinanana ary manavatsava ny nosin'i Japana Honshu ireo rivodoza, ary voasakan'ireo tendrombohitra manodidina ireo tanàna kely avaratr'i Tokyo ny ampahany amin'ny heriny.
Hatrizay, miala avy any avaratra ka mikisaka mankany atsinanana ary manavatsava ny nosy Japoney an'i Honshu ireo rivodoza, ary voasakan'ireo tendrombohitra manodidina ireo tanàna kely avaratr'i Tokyo ny ampahany amin'ny heriny. Sary natambatr'i Nevin Thompson, avy tamin'ny Wikipedia.
Tato anatin'ny taona vitsivitsy izay, nanova ny fikapohan'ny rivodoza ny tany ao amin'ny faritry Tokyo ihany koa ny fiovàn'ny fandehan'ny rivotra noho ny fiovàn'ny toetrandro.
Saiky avy any atsimo ankehitriny ny fiavian'ny rivodoza ary avy amin'ny Ranomasimbe Pasifika misokatra. Amin'ny tsy fisian'ireo tendrombohitra mitandahatra manakana ny herin'ilay rivodoza eo anoloana, mikoriana mankany avaratra any Tokyo sy ny lemak'i Kanto ny rivotra mafana sy mando be alohan'ny hibahanan'ireo rindrin-tendrombohitra izay manodidina an'i Tokyo any avaratra azy.
Noho ny fiovàn'ny toetrandro sy ny fiovàn'ny fandehan'ny rivotra, miangona ao Tokyo sy ny lemaky Kanto mivantana avy any atsimo sy ny ranomasimbe Pasifika misokatra, ny hamandoana be amin'ny toetrandro. Sary natambatr'i Nevin Thompson, avy amin'ny Wikipedia.
Ny vokatr'izany, dia ireo rivodoza izay lasa mihalehibe sy mihamahery tato anatin'ny taona vitsivitsy izay, vao mainka mahatonga tondradrano lehibe kokoa noho ny tamin'ny folo taona lasa izay.
Ho an'ny maro, nanimba zavatra betsaka ilay rivo-doza tamin'iny herinandro lasa iny, fa fotoana fakàna lesona ihany koa anefa ho an'ireo olona sasany. Nisy mpampiasa Twitter iray nanamarika fa ny olona tao amin'ny “2ch (“ni-chan”)”, toy ny Reddit sy 4chan ao Japana, dia namakafaka tamin'ny antsipirihany ireo karazana angidimby naseho tao amin'ny televiziôna nandritra ilay ezaka fanavotana nandritry ny loza.
Natambatry ny olona iray tao amin'ny 2ch io, fa ireto ireo angidimby rehetra nanampy tamin'ny tondradrano tao Joso, Ibaraki.